Orinasa tokana-sosona-PCB, mpamatsy - mpamokatra China Single-Layer-PCB
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fitaovana FR4 amin'ny fanamboarana PCB fitaovana FR-4, ity no fanafohezana ny lamba fibre vera, karazana akora sy fantsom-pifamoivoizana substrate izy io, ny birao fizaran-tany tokana, misy lafiny roa sy maro sosona dia vita amin'ity! Takelaka mahazatra be io! Toy ny Shengyi, Jiantao (KB), Jin An Guoji no mpanamboatra tokantrano telo lehibe, toa ny fitaovana FR-4 an'ny mpanamboatra birao ihany: Wuzhou Electronics, Penghao Electronics, Wanno E ...
Birao boribory miorina amin'ny aliminioma: Circuit substrate Aluminium, fantatra ihany koa amin'ny hoe board circuit, dia takelaka varahina mitafy vy tsy manam-paharoa miaraka amin'ny fitarihana hafanana tsara, ny fahombiazan'ny insulation elektrika ary ny fahombiazan'ny fanodinana mekanika. Izy io dia misy foil varahina, sosona fanamafisam-peo mafana ary substrate vy. Ny firafiny dia mizara ho telo sosona: sosona boribory: varahina mitovy amin'ny PCB mahazatra, ny hatevin'ny varahina varahina dia 1oz ka hatramin'ny 10oz. Fanamafisam-peo: ny sosona insulation a la ...
FPC board fléksibel FPC fllex board dia karazana board circuit malefaka miaraka amina rafitra tsotra indrindra, izay ampiasaina indrindra hifandraisana amin'ireo tabilao hafa. Ny tabilao miovaova PCB dia manondro ny tabilao mihodina FPC. Ny takelaka boribory malefaka FPC, fantatra ihany koa amin'ny hoe tabilao miovaova, dia karazana PCB misy fahalemena tsara. Ny takelaka boribory malefaka FPC dia manana tombony amin'ny fikafika avo lenta sy fitambarana, malefaka tsara, volavola kely, lanja maivana ary hateviny manify, rafitra tsotra, conv ...